I-Stipple: Izithombe Ezihlakaniphile Nezisebenzisanayo | Martech Zone
I-Stipple: Izithombe Ezihlakaniphile Nezisebenzisanayo
NgoLwesine, Januwari 10, 2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kuthiwani uma ungathumela izithombe kuwebhusayithi yakho noma kubhulogi, uzenze zisebenzisane, futhi usebenzise futhi umake ukuhamba nazo njengoba zikopishwa kusuka kusayithi lakho bese zigcinwa kwenye? Ungakwenza lokhu manje nge Ukukhubazeka. I-Stipple futhi inika amandla imininingwane yokusebenzisa ngokusebenzisa i- analytics iphakethe. Mouseover isithombe esingezansi ukubona iStipple isebenza!
Ungabona amathegi wokuxhumana engiwangezile kulesi sithombe sehhovisi lethu - ukwenza imephu, i-Facebook, i-Twitter, kanye nethegi lokuthenga lapho ungathenga khona incwadi yami. Enye yezinto engikholwa ukuthi iStipple ingasetshenziswa kahle kuyo ngokombono wokumaketha ukushicilelwa kwe-infographics! Ukuba nekhono lokwengeza ama-callout nokulandela ukusetshenziswa kwe-infographic kungasiza kakhulu kunoma yikuphi ukuhlanganiswa.
Injini yokumaka nokuphatha imahhala futhi yakhiwe njengohlelo lokwabelana komphakathi.
Nasi ukubuka konke kwevidiyo kobuchwepheshe:
Ukukhubazeka inama-plugins enzelwe i-WordPress namanye amasistimu wokulawulwa kokuqukethwe ukuvumelanisa ngokuzenzakalela nokulayisha izithombe ezivela kubhulogi yakho.
I-Stipple izosetshenziswa ezithombeni ezivela ku- Imiklomelo Ye-Movie Yokukhetha Abagxeki. Ngokubambisana ne ABANTU, abalandeli bangahlola futhi bathenge 'Amafilimu nezimfashini' zikakhaphethi obomvu Ukusabalala kwe- PEOPLE.com ngama-Critics 'Choice Movie Awards. Ubuchwepheshe bokusebenzisana bukaStipple buzokwenza abalandeli bafunde kabanzi ngezinkanyezi, amafilimu abo nezitayela zabo. AmaCritics 'Choice Movie Awards azobanjwa ngoLwesine, Januwari 10, ngo-8 ebusuku EST. Umbukiso wangaphambi kukakhaphethi obomvu uqala ngo-6pm EST.
Tags: izibalo zesithombeama-callout wesithombeukumaka isithombeukusetshenziswa kwesithombeukukhubeka
Umlando Wezobuchwepheshe Bokuthengisa
Ukutubeka Kwenhlolovo Yamakhasimende